Karoorri Bara 2013 qaama karoora imala badhaadhinaa waggoottan kurnan itti aananii ta’e, bara 2013tti oomishaafi oomishtummaa qonnaa dabaluun cinaatti, hojiiwwan tarsiimaa’aa ta’an kan akka makaanaayizeeshinii qonnaa, misooma beeyladaa, misooma jallisiifi bishaan cimmisuu, sirna faayinaansii baadiyyaa, agiro-piroosesingiifi walitti hidhamiinsa gabaa oomisha qonnaa irratti jalqabbiiwwan gaarii jiran sadarkaa ol’aanaatti ceessisuudhaaf hojimaata fooyya’oo diriirsuuf kan hojjetamu ta’a.
Qonna gannaatiin lafa hektaara mil. 6.1 qotamee midhaan kuntaala mil. 191.3 oomishuufi hojii qonna arfaasaatiinis lafa hektaara kuma 929.5 qotamee facaafamu irraa oomishni kuntaala mil.15 sassaabuuf kan hojjetamu yommuu ta’u, omishaafi omishtummaa qonnaa dabaluuf hojiin kilaastaraan facaasuu cimee kan itti fufu ta’a.
Bara 2013 keessatti xaa’oon kuntaala mil.7.4 fi sanyii filatamaa kuntaala mil. 1 dhihaatee hojiirra kan oolu yommuu ta’u, qisaasama oomisha duraa fi boodaa uumamuu danda’u hir’isuuf dhiheessii fi ittifayyadama makanaayizeshinii cimsuuf tiraaktarootni 3000, kombaayinarotni 350, paampii bishaanii 10,000 fi facaaftuun sararaa 6,900 kan dhiyaatan ta’a. Akkasumas, oomishaafi gabaa omishaalee alergii fooyyessuuf qarshiin bil.34.7 akka dhiyaatu ni taasifama.
Waliin gahiinsa bishaan dhugaatii qulqulluu Naannoo keenyaa waliigalaan mil. 31 fayyadamtoota taasifamuun, uwwisa bishaan dhugaatii qulqulluu Naannoo keenyaa % 77.1 irraan gahuuf kan hojjetamu ta’a. Ijaarsa daandii baadiyyaa km 170 fi sarara daandii sagantaa waliingahinsa daandii baadiyyaa km 1,907 cirracha uwwisuun qabeenya daandii Naannoo keenyaa gara km kuma 57.7tti ol guddisuu fi sarara daandii km 6.3 suphuun tajaajilaaf akka oolu ni taasifama.
Guddina dinagdee qulqullina qabu galmeessisuun, dargaggoonni keenya misooma gaggeeffamu irraa fayyadamaa akka ta’aniif, lammiilee mil.1.05 hojii dhaabbii fi kuma 200f immoo carraan hojii yeroo; walumaagalaan, lammiilee mil.1.25f carraan hojii kan uumamu yommuu ta’u, dargaggoonni kun paakeejii deeggarsa adda addaa akka argatan taasisuuf qusannaa waliigalaa qar.bil.10.2 saassabuun liqiin qar.bil.3.5 akka mijatuuf ni hojjetama.
Sadarkaa magaalaatti uwwisa kaadaastaraa %60 irraan gahuun karoora waggaa 10 keessatti karoorfame ka’uumsa godhachuun, bara 2013tti magaaloota 35 keeessatti mirkaneessaa fi galmeessa qabiyyee lafaa kuma 57.4 kan gaggeeffamuu fi baadiyyaatti cittuun lafaa mil.1.5 safaruu fi galmeessuun kaartaa sadarkaa 2ffaa mil.1.1 kan kennamu ta’a. Duudhaa fi aadaa uummata keenya callaqqisiisuu danda’uun paarkiiwwan magariisuu gosa adda addaa 15 kan ijaaramaan ta’a.
Gama dhiyeessii tajaajila geejjibaatiin sarara bobbii haaraa 40 fi sarara bobbii bilisaa irratti kennamu 20 kan banaman yommuu ta’u, hayyama oppireetarummaa haaraa 1,200 akkasumas haareessuu kuma 12.3 kennuun hayyamaa waldaalee deddebisaa uummataa haaraa 5fi haareessuu 93 kan raawwatu ta’a. Carraa barnootaa walgitinsa irratti hundaa’e babal’isuuf dhaabbilee barnootaa qaqqabamaa gochuun hirmaannaan barnootaa sadarkaa hundaa akka ol dabaluuf kan hojjetamu yommuu ta’u, hirmaannaa barattootaa kutaa 1-12, barnoota idileen duraa fi barnoota fedhii addaa dabalatee bara 2012tti mil. 10.6 irra ture bara 2013tti mil.11.5tti ol-guddisuuf karoorfamee jira.
Gama birootiin, daa’imman talaalliiwwan gosa adda addaa akka argatanii fi calallii hanqina nyaata daa’immanii guddisuuf kan hojjetamu ta’a. Akkasumas, bara baajataa 2013tti galii idilee qar.bil.24 fi gali mana qopheessaa qar.bil.4.65, waliigalaan qar.bil.28.65 walitti qabuuf kan hojjetamu ta’a.
Hojiiwwan bara 2013 akka naannotti hojjatamuuf karoorfaman milkeessuuf, bajatni qr. bil. 90 kan ramadame yommuu ta’u; bajata baasiif ramadame keessaa qr. bil. 28.8 (%32) maddoota galii idilee fi galii keessaatiin kan sassaabamuu fi deeggarsa baasii mootummaa Federaalaa irraa qr. bil.61.2 (%68) argamuun uwwisuuf karoorfameera.
Toorbee kana 1232
Ji'a kana 14652
2008 irraa eggalee 4630140